Laminate njengoba ekhishini flooring kubhekwa a iphila okunye zobumba stoneware, linoleum noma amapulangwe aphansi. Chaza lokhu udumo ulula.
Lokhu kwaziswa akuyona kuphela esiwusizo kakhulu futhi iqine lisetshenziswa, kodwa futhi ezihlukahlukene imibala ehlukene kanye indlela yokwenza, engambi eqolo futhi ukufakwa lula. Ukukhetha laminate flooring ekhishini, kwanele ukulandela imithetho elula, futhi ungaqiniseka ukuthi udaba wokususa flooring egumbini isikhathi eside akazange uvuke phambi kwakho.
Ngakho, lapho kumelwe ukhethe zokwakha kuyadingeka ukuchaza Inhloso yomsebenzi. Kulesi sikhathi kubalulekile ukucabangela hhayi kuphela indawo egumbini futhi yomhlobiso wawo esizayo, kodwa futhi isimo samanje. Mhlawumbe ngaphambili kwakudinga uchungechunge izinyathelo wokulungiselela, kuhlanganise ukucutshungulwa kanye ukuqondanisa evele, ukuqaqa noma izindonga sokubuyiselwa. izinga yabo ingase ixhomeke endleleni umphumela yonke imizamo yokulungisa ukukhiqizwa.
Ungabese uqhubeke ngqo Ukukhetha. flooring laminate ekhishini akufanele kwenziwe nje enhle, kodwa futhi ube nenamba izici ezengeziwe. Abakwazi njengesithiyo umswakama nokufudumala. Amasosha omzimba emiphumeleni uketshezi, mhlawumbe ipharamitha ibaluleke kakhulu, yini okufanele babe laminate flooring ekhishini. Isibhakabhaka Okuningi ezinomswakama endlini ukhona kuphela egumbini lokugezela. Umswakama uyakwazi ukuvula i-ekhishini lakho phansi ngumbukwane ezicindezelayo kakhulu, ngakho indiva lesi sici umgwengwezi akudingekile.
Kepha ukuthungwa, lapha ukukhetha kukhawulwe kuphela umcabango umklami noma umnikazi. Nokho, akumelwe sikhohlwe mayelana lokuthi kungakhathaliseki ukuthi bahlanza ngokucophelela, flooring laminated ekhishini nakanjani embozwe ifilimu ka amafutha nothuli. Sula phansi bushelelezi kuwo lula kunalokho ibhodi ngephethini embossed. Lo mbono kuyinto debatable, kodwa izimo ezinjalo - akuyona into engajwayelekile. Hhayi esivuna surface bushelelezi edlala kuphela yokuthi amathuba ilele kuso ingaphezu kwe phezu nge iphethini ribbed.
izingqimba Base ngaphansi ibhodi laminated - into kwakungaphephile nje kuphela ubuchwepheshe. It ngeke nje wenze esitezi smooth xaxa futhi ugwema ukusonteka ebhodini, kodwa ngeke ukuthulisa umsindo wezigi, nezinto eziwayo, noma ukuhamba kobuso ifenisha.
Ngokuphathelene njalo, kulokhu, laminate ekhishini kuyinto yesibili kuphela tile Ceramic. Awuvikele imihuzuko noma ezinye usizo, wazizwa pads ngemilenze ifenisha, ukuvikelwa okungeziwe ngokubhekene umswakama izonikeza ingubo encane nge isizinda iraba ngokuhlanza ikhaya. Uma, naphezu kwakho konke ongase ukwenze, phezu kwalolo ngwengwezi avela ezilimele, balahle kubo kuyosisiza ejenti ukugqiba, okuyinto manje kukhiqizwa izinto eziningi ezanele yizimboni amakhemikhali yasendlini.
Laminate for ekhishini kuyozuzisa ukugcizelela yomhlobiso wawo. Uyakwazi babe main umbala nokugqamisa egumbini. Ubuchwepheshe banamuhla ivumela ukufeza isimanga visual effects e ukuthungwa ibhodi laminated (isibonelo, ukuze kuzuzwe 100% ukufana izinhlobo ezibizayo noma ezingavamile zezihlahla) ezinikeza ekhishini ingaphakathi izibambe izikhulu kanye ehloniphekayo.
Umbala efrijini - isixazululo esingcono ngoba ekhishini yesimanje
Tea isiphethu samanzi ashisayo lwemsebenti: incazelo, izilinganiso umsebenzisi kanye nokubuyekeza
Isevisi yesiqinisekiso Apple
"Biomechanics tattoo" - a eziyinkimbinkimbi tattoo yesimanje art isiqondiso
Alla - usuku igama ikhalenda isonto
Vacuum cleaner omkhathi nge aquafiltering Thomas: Uhlolojikelele, izici, izinhlobo nezilinganiso
Njengoba belashwa rhinitis okungamahlalakhona